China E-1 Njere Yemvura Kudyisa Kugadzira uye Fekitori | Kusetsa
Sei zvipfuyo zvichida smart smart feeders?
Mumamiriro ezvinhu akajairwa, varidzi vezvipfuyo vanoshandisa zvakajairika mbiya dzechipfu kupa mvura yekudyisa zvinodiwa. Asi chinoda kuzivikanwa zviri pachena ndechekuti mvura yekunwa yemhuka yakachena uye yakachena, izvo zvinokanganisa hutano hwechipfuwo. Uye isu tinowanzoona kuti mhuka dzinovaraidza dzinoshingirira kumvura inosara kwenguva yakareba. Izvi zvinodaro nekuti mvura iri mundiro yemhuka haizi kuyerera, saka zviri nyore kudzora tsvina mumvura kwenguva yakareba uye tsvina iri mumhepo inozoshambadzwawo pamusoro pemvura. Inobva yabereka mabhakitiriya.
E-1 Intelligent Water Feeding yakagadzirirwa kugadzirisa matambudziko aya uye ichavandudza mabatiro anobata varidzi vezvipfuyo.
Infrared induction mvura
Mativi matatu anonzwisisa mvura, uye mvura inogona kugadzirwa otomatiki mukati me30cm kubva kune ese epamberi, kuruboshwe uye kurudyi mativi, izvo zvinomutsa kufarira kwechipfuwo mumvura yekunwa. Kana chipfuyo chikasiya nzvimbo yekunzwa, iyo pombi yemvura inomira kushanda mushure memasekonzi gumi
Quadruple kusefa, kutenderera kunatswa
Yakawandisa calcium uye magnesium ions mumvura chinhu chakakosha kumhuka dzemhuka dzekuvhenekera uye mamwe matambudziko eweti, uye zvinhu zvinokuvadza senge yakasara chlorine uye ioni yesimbi inorema mumvura zvinokanganisa hutano hwezvipfuyo. Naizvozvo, chigadzirwa ichi chinoshandisa kakapetwa kanomwe kuchenesa uye kusefa kunatsiridza mhando yakapfava yemvura uye kubvumira zvipfuwo kunwa mvura ine hutano: tereyi meshes, yekutanga kusefa, ichivharira tsvina yakakura sevhudzi; yakakwira-sisitimu firita donje kupatsanura michero yakaita sejecha nengura; coconut Shell activated kabhoni inotora yakasara chlorine uye inobvisa hwema; Ion exchange resin yakanyanyisa kusefa inorema simbi ions, nezvimwe.
Unplugged yekushandisa dhizaini
Mushure mekuchaja kwe USB, inogona kushandiswa pasina kubaya mukati kudzivirira zvipfuyo kubva pakuruma nekukuvadza kuchengetedzeka kwemhuka dzinovaraidza. Kubhadharisa kwemaawa mana kunogona kushandiswa kuenderera kwemaawa manomwe, kumirira kusvika kwevhiki rimwe chete
Iko kushandiswa kwepombi dzemvura dzinosangana neEuropean neAmerican zviyero zvinodzivirira kuomesa kupisa, kushomeka kwekushandisa uye kuchengetedza simba, uye kunogonesa kugona kwekutaura, kuchiita kuti igare yakasimba. Iyo 5V yakaderera-voltage yakanyarara pombi yemvura zvinobudirira inoderedza iyo isina kusimba ruzha rwemvura inoyerera kusvika makumi mana emadhivhuru
Pashure: E Magetsi Pet Chipikiri Girafu
Zvadaro: E-2 Apple Kunwa Tsime